तपाईं सुत्दा घुर्नुहुन्छ ? यदी त्यसो हो भने अपनाउनुहोस् यो नियम ? - Sabal Post
तपाईं सुत्दा घुर्नुहुन्छ ? यदी त्यसो हो भने अपनाउनुहोस् यो नियम ?
२ असार २०७६, सोमबार ० बिचार / प्रतिक्रिया
एजेन्सी – एकपटक म र मेरा साथीहरु हिँउ खेल्न भनी नगरकोट गएका थियौँ । अत्यधिक हिँउको कारणले त्यो दिन गाडी नै चलेन । घर फर्कन सम्भव नभएपछि हामी सबैजना त्यहीँ बस्ने निर्णय ग¥यौँ । होटलहरु पनि सबै भरिएकोले गर्दा ३–३ जना एकै कोठामा सुत्नु पर्ने भयो । ओहो, मेरो साथी प्रमेश त कस्तो घुर्दो रहेछ ! अझ त्यसमाथि पनि चिसोले गर्दा म र मेरो अर्को साथी श्रेयस्कर त सुत्नै सकेनौँ । भोलि पल्ट हामीले प्रमेशलाई ऊ घुर्ने गरेको बताउँदा त उसलाई यसबारे केही थाहा नै पो नभएको बतायो । त्यसपछि मेरो मनमा प्रश्न उठ्यो– आखिर किन कोही मानिस घुर्छन् ? किन उनीहरु आफैंलाई चाहिँ यसबारे केही थाहा हुँदैन ?
यसबारे अध्ययन गर्दै जादाँ त घुर्ने समस्या भनेको त मानिसमा देखापर्ने अन्य समस्याहरु खुट्टा गनाउने, धेरै पसिना आउने, एलर्जी आदि जस्तै रहेछ । यस्तो समस्या केही मानिसलाई मात्र हुन्छ । करिब २० प्रतिशत मानिसहरुमा यो समस्या देखिँदो रहेछ ।
यदि सास फेर्दा हावा स्वतन्त्र रुपमा चल्न पाएन भने मानिस घुर्न थाल्छ । घुर्ने समस्या हाम्रो शरीरकै अंगसँग सम्बन्धित छ । हाम्रो घाँटी पछाडि रहेको एउटा कमलो टिस्यु (मासुको डल्लो)को कारणले गर्दा यो समस्या देखापर्छ । यही टिस्युकै मद्दतले हामी कुल्ला गर्न, निल्न र विभिन्न आवाज निकालेर बोल्न सक्छौँ । कुनै पनि कारणले त्यो टिस्युमा बृद्धि भयो भने मानिस घुर्न थाल्छ । यही टिस्यु र अन्य टिस्यु जस्तै उभ्ला, टन्सिल आदि सास फेर्दा हाम्रो घाँटीको पछाडि कम्पन गर्छ । जसले अवाज पैदा गर्छ । यो प्रक्रिया बेलुनबाट हावा निकाल्दा आउने आवजसँग मेल खान्छ ।
कस्ता मान्छे घुर्छन् त ? यदि मानिसले सुत्नुभन्दा पहिले जाँडरक्सी खायो भने उसको जिब्रोको मोटाइमा केही हदसम्म बृद्धि हुन्छ । सुत्दा पनि त्यो जिब्रो अलिक पछाडि धकेलिन्छ । यसले श्वासप्रश्वास स्वतन्त्ररुपमा हुन सक्दैन । त्यही भएर रक्सी खाने मानिस धेरै घुर्छन् । गहिरो निद्रामा परेको बेला पनि कहिलेकाहीँ यस्तो हुने गर्छ । मानिस घुर्नुको अर्को कारण भनेको मानिसको घाँटीको टिस्युमा हुने बृद्धि पनि हो । विशेष गरेर मोटो मानिसमा यस्तो समस्या देखापर्छ । त्यही भएर दुब्ला मानिसका तुलनामा मोटो मानिस धेरै घुर्ने गर्छन् । रुघा लागेको वा पिनासको समस्या भएको मानिस पनि घुर्ने गरेका पाइएको छ । नाकबाट खुला रुपमा श्वासप्रश्वास हुन नपाएपछि यस्ता समस्याबाट ग्रसित मानिसहरु घुर्न थाल्छन् । कहिलेकाहीँ त नाकमा जम्ने फोहोरको कारणले पनि यस्तो समस्या देखा पर्छ ।
के घुर्नु नराम्रो हो ? सामाजिक रुपमा हेर्न हो भने अवस्य नै घुर्नु नराम्रो हो । यसले अरुलाई रातको समयमा बाधा पु¥याउन र निद्रा बिथोलिदिन सक्छ । स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि घुर्नुलाई राम्रो मानिदैन । यसले स्वास्थ्यमा दुरगामी असर पार्न सक्छ । यसले शरीरमा अन्य समस्याहरु पनि खडा गर्न सक्छ ।
के घुर्ने बानीलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ ? अवश्य सकिन्छ । यसका लगि डाक्टरबाट विशेष सल्लाह लिन सकिन्छ । यस सम्बन्धी डाक्टरलाई यतयबिचथलनययि(नष्कत भनिन्छ । मुख, घाँटी र नाकको जाँच पछि कस्तो उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ । घुर्ने मानिसमा ४० प्रतिशत पुरुष र २५ प्रतिशत महिला रहेका छन् । धेरै उमेर भएका मानिसहरु बेढी घुर्ने गरेको पाइएको छ । ५५ देखि ८५ उमेर समूहमा १÷३ मानिस घुर्दो रहेछन् । घुर्ने बानी हटाउने मुख्य ८ तरिकाहरु निम्न छन्:
१) सधंै कोल्टे परेर सुत्नुहोस् । उत्तानो परेर सुत्दा मानिस धेरै घुर्ने गरेको पाइएको छ ।
२) आफ्नो वजन घटाउनुहोस् । विशेष गरेर घाँटीमा बोसो जम्मा भयो भने पनि स्वतन्त्र रुपमा हावा मानिसको फोक्सो बाहिर र भित्र वहाव हुन पाउँदैन र मानिस घुर्छ ।
३) रक्सी र अन्य मादक पदार्थ खान छाड्नुहोस् । निद्रा लगाउने औषधिले पनि हाम्रो स्नायुप्रणालीमा असर पु¥याउन सक्छ । जसले हाम्रो घाटीमा नियन्त्रण हुँदैन र हामी घुर्न थाल्छौँ ।
४) एलर्जीहरुको उपचार गर्नुहोस् । श्वासप्रश्वास सम्बन्धी एलर्जीले पनि हावामा बाधा पु¥याइ घुर्ने समस्या ल्याउन सक्छ । यसले पछि गएर दमजस्तो समस्या पनि देखापर्न सक्छ ।
५) चुरोट खाने बानी त्याग्नुहोस् । यसले तपाइँको श्वासप्रश्वास प्रणालीलाई असर गर्छ ।
६) सुत्ने उठ्ने समय तालिका सधैं एउटै बनाउनुहोस् । ठीक समयसम्म सुत्नुहोस् ।
७) गर्भवती अवस्थामा तपाइँ घुर्नु हुन्छ भने डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् । यस्तो भयो भने पेटमा भएको बच्चाले प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन नपाउन सक्छ ।
८) सुत्दा सिरानीको प्रयोग गर्नुहोस् । टाउको अलि माथि उठाएर सुत्ने गरियो भने पनि हावालाई निबार्ध रुपमा चल्न सजिलो हुन्छ ।
घुर्ने समस्याले गर्दा पछि गएर निकै ठूला समस्याहरु निम्ताउन सक्छ । त्यसैले समयमा नै यसको रोकथाम गर्नु नै उचित हुन्छ ।
डुवानका बारेमा भारतसँग कुटनीतिक रुपमा कुरा गरौं,…
राजनीतिक विश्‍लेषक भन्छन्- चुनावी सर्वेक्षण वास्तविकताभन्दा फरक
एमसीसीमा कुनै पनि व्यवधान छैन, तुरुन्त संसदबाट…
नागपञ्चमीको अवसरमा नागपोखरीमा मेला